Oche ime ime Belt Adjuster
$ 19.99 Ịgachi price $ 37.99
ụgbọ mmiri ndị si China United Kingdom United States Australia Spain Italy France Germany
Aha agba Green Black White
China / Green United Kingdom / Green United States / Green Australia / Green Spain / Green Italy / Green France / Green China / Nwa Italy / Black Germany / White France / Nwa Germany / Green United Kingdom / White United States / White Germany / Black Australia / White Spain / ọcha Italy / White China / White France / ọcha United Kingdom / Black United States / Nwa Australia / Ndi ojii Spain / Nwa
Pregnancy Seat Belt Adjuster - China / Green na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Item Ogologo: 21cm
Ihe Type: ABS + PPC
Nkebi Type: Okpu Belt & Padding
Item arọ: 0.35kg
Item Obosara: 10cm
Aha ụdị: YFAQD01
Nlereanya ule n'èzí: ROHS
Agba: Bụkọ, White, Green
Oche eriri n'ogologo: banyere 1.8 mita
Dị dabara adaba: Universal maka ụdị ọ bụla
ụdị: Nwanyị dị ime na-akwọ ụgbọ ala nchebe
Asambodo Nnwale Nke Mpụga: ROHS
Uru: Nkasi obi na nchekwa maka ndị nne dị ime, na-echebe nwa e bu n'afọ, Nwanyị dị ime na-akwọ ụgbọala mama
Mgbasa ozi: Ndọtị eriri oche dị ime nwatakịrị ahụ dị ime ga-ekwe ka eriri ahụ kpụrụ apata ụkwụ kama nke afọ, nke mere na mmetụ ahụ na-agbasa n'ụzọ anọ, dịka ubu, n'akụkụ ukwu, na nkwonkwo ụkwụ, ọ naghịkwa eme ya. pịa afọ.
Dị mfe ịwụnye: Mezie eriri gburugburu oche maka otu izu iji mezue nrụnye ahụ! Installationzọ ntinye dị mfe nghọta, onye ọ bụla nwere ike ịwụnye ma wepu ya ngwa ngwa.
Ihe omuma di iche: Naanị lelee oru nke ihe a n’onwe ya; ọ dị obere ma na-atọ ụtọ; anaghị anagide ohere, nwere ike ndakọrịta na oghere ime ahụ.
Nchịkwa eriri oche a maka ime ime dabara na oche ahụ. Mgbe ịwụnye, ịnya, na ịpụ apụ, a gaghị enwe ahụ anụ ahụ ọzọ; usoro ịgbatị ihu agaghị asọpụ uwe ndị ahụ; A nwekwara ike iji ya mee ihe mgbe ọ bụla.
Ndị ọdabara: Ngwaahịa a dị mma maka ụmụ nwanyị niile dị ime, ọmụmụ nwa, afọ ime, ịwa afọ, nnukwu afọ, afọ biya na ihe ndị ọzọ.
Otu nke Umu Anumanu anyi Car Belt Adjuster si aru oru:
Ihe mgbochi eriri ahụ na-eme ka eriri ahụ na-anọdụ ala n'apata ụkwụ, kama ị na-eme n'afọ karịa nke na-eme ka ahụ erughị ala maka uto na-eto. Ọ na-enyere ndị ọkwọ ụgbọala dị ime aka ilekwasị anya n'ịkwọ ụgbọala, na-emekwa ka ndị njem dị ime nwee ahụ iru ala ma nwee nchekwa. Ahịrị oche oche ụgbọ ala gị ka na-arụ ọrụ dịka o kwesịrị ịdị na nke a.
Uru nke oche nne ejikọtara oche Belt Adjuster:
Ngwa ahịa ndị dịkarịsịrị mma nwere ike ịnwe mkpuchi / kwushin n'akụkụ oche. Nke a nwere ike imetụta arụ ọrụ nke ikpo ọkụ oche ma ọ bụ ikuku ikuku
Edebere ya na ihe eji emechi mkpọchi ala nke ọnwa nwanyị ka ọ dị ime rue oge nwa a mụrụ.
Maka onye ọ bụla nwee ịwa ahụ ma ọ bụ nke afọ, ngalaba cesarean, ọ nwere ike inye aka belata ahụ erughị ala na ahụ mgbu n'enweghị nsogbu ọ bụla.